American Airlines jiri ya tụnyere Jet Blue: Onye otu Platinum Executive nwere nzaghachi dị ịtụnanya | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » American Airlines jiri ya tụnyere Jet Blue: Onye otu Platinum Executive nwere nzaghachi dị ịtụnanya
American Airlines jiri ya tụnyere Jet Blue: Onye otu Platinum Executive nwere nzaghachi dị ịtụnanya
Bụ onye otu ndị isi ụgbọ elu ndị ụgbọelu America nwere ike inwe ntakịrị ihe mgbe ha na-agba ụgbọ elu na AA na Roxie. O yiri ka enwere nnukwu ọdịiche maka onye nwe anụ ụlọ ịhọrọ JetBlue ụgbọelu ndị America.
Ime ihe ziri ezi dị iche na ịme ihe ziri ezi.
American ụgbọ elu vs. JetBlue.
Kedu onye Executive Platinum Member nke American Airlines ruo ọtụtụ afọ pụtara n'ụzọ ụgbọ elu?
Nke a bụ ntakịrị nke iwe na ogologo post yabụ gaa n'ihu na-agụ ihe ịchọrọ. Mana ịgụ na ịkekọrịta nke a nwere ike inyere ndị nwe ụlọ / ndị hụrụ n'anya n'anya ndị ọzọ na-eme atụmatụ ịfe anụ ụlọ ha otu ụbọchị. Achọghị m ka ahụmịhe m jọgburu onwe ya na American Airlines mee na ndị ọzọ.
Airlinesgbọ elu America tụgharịrị Frenchie m, Roxie na ụgbọ elu anyị si PBI - DFW - LAX n'ihi na o doro anya na ọ gaghị enwe ike iguzo na ụgbọelu ahụ mgbe ọ mechiri emechi ma tụgharịa.
Ọ nwere ike ịtụgharị mana ọ gafere n'elu ụgbọelu ahụ. Dị ka m maara, naanị obere nkịta na obere ụmụ nkịta nwere ike ime nke ahụ nyere nha nke ndị kwere ekwe nke ndị na-ebu ya.
Mụ na ndị ụgbọ elu America jiri ụgbọelu gbagoo Roxie ọtụtụ oge, nke a abụbeghị nsogbu. N'ihi nke a enwere m ịkagbu ụgbọ elu m ma enweghị ike ibula ụgbọ elu m na LA. Nke a mere ka mụ na Roxie nọrọ n'ọnọdụ a na-ejighị n'aka na ọdụ ụgbọ elu. Aghọtaghị m ezi uche maka ịjụ anyị.
Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu America na-akagbu ọtụtụ narị ụgbọ elu kwa ụbọchị n'ihi enweghị ike ijikwa elu na ịbugharị ụgbọ elu oge niile.
Nke a adịghị ka ọ na-eme n'ụgbọelu ndị ọzọ, yabụ na ọ bụ ngosipụta nke enweghị ike ha. Tupu ihe a emee, ha na-arịọ ndị ọrụ afọ ofufo ịhapụ oche maka ego.
Mgbe ahụ, ha kwụsịrị ụgbọelu mbụ m kwụsịrị awa abụọ tupu ụgbọ elu ahụ. Mgbe ahụ degaghachiri m n'ụgbọ elu nke na-ada na Burbank kama Orange Country nke dị nso n'ụlọ ahụ. Ekwenyere m na nke a mere n'ihi na ha na-achọta ihe ọ bụla mere ị ga-eji hapụ oche ka ha wee nwee ike jupụta nkwụghachi ụgwọ na nkwụsị ụgbọ elu niile.